"TEAM BUILDING" ETO MANTASOA | Primature
Mantasoa, 13 febroary 2018- Tonga nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny “team building” ny Filohampirenena Hery Rajaonarimampianina ny marainan’ny 13 febroary 2018 izay notronon’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier, ireo Mpikambana ao amin’ny Governemanta ary ireo teknisianina isaky ny Ministera. Notontosaina tao amin’ny trano fivahinianana ho an’ny Filohampirenena eto Mantasoa izany lanonana izany.
Fotoana entina hanomezana fiofanana ho an’ny Mpikambana ao anatin’ny Governemanta ny “team building” izay atao mandritra ny roa andro satria ilaina ny manavao hatrany ny traikefa. Eo ihany koa ny fanaovana jery todika ny asa nataon’ny Governemanta nandritra izay efatra taona niasana niaraka tamin’ny Filohampirenena izay. Nanambara ny Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier fa “ny fampandrosoana ny firenena iray dia miainga avy amin’ny Vinan’ny Filoham-pirenena, ka ny hampandroso no tanjony”. Mba entina hanatanterahina izany vinan’ny Filoham-pirenena izany dia nampatsiahy ny Praiminisitra mahakasika ireo fandaharan’asa natolony tamin’ny fifandimbiasam-pahefana izay ahitana ny ady amin’ny fahantrana toa ny fijerena manokana ny ara-tsosialim-bahoaka, ny ady amin’ny resaka tsy fandriampahalemana, ny ady amin’ny resaka kolikoly ary ny ady amin’ny fanondranana antsokosoko ny harena ankibon’ny tany. “Amin’izao fotoana izao dia hita soritra ny tena lalan-kombana satria misy vina izay Dinan’ny filoham-pirenena amin’ny alalan’ny fisandratana 2030. Fandaharan’asa goavana no tiana ho vitaina ao anatin’io koa misy asa tsy maintsy ho tontosaina izay misy dingana arahina. Ny tena zava-dehibe ataon’ny Governemanta araka izany, ny fijerena anatin’izay vina izay ny asa sy laharam-pahamehana maika tsy maintsy tanterahina, izay asa mipaka mivantana amin’ny fiainan’ny vahoaka. Jerena araka izany ny tsy fandriam-pahalemana, ny fiakaran’ny vidim-piainana, ny tsy hisian’ny fanakorontanana”.
Nanamafy hatrany ny Praiminisitra fa “ tsy maintsy arindra izay rehetra izay satria iray ny Governemanta. Tsy miasa ho an’ny tenany ny Minisitra sy ny Ministera fa miasa ho an’ny Governemanta ary miasa ho an’ny vahoaka. Ny fanaovana jery todika ary fitodiana amin’ny ho avy izay miainga amin’ny fisandratana 2030 sy ny fijerena misimisy kokoa ny asa maika tsy maintsy tontosaina amin’ity taona ity no asa atao. Miandry ny vahoaka ary mihaino ny vahoaka ny Governemanta izay miaraka amin’ny Filoham-pirenena ka izay maharary ny vahoaka no jerena vahaolana ahafahana mamaha azy”.
Fotoana tahaka izao no ahafahan’ny Governemanta manamafy ny resaka firaisankina izay zavatra ilaina. “tokony hiray hina ary tokony ho hitan’ny vahoaka fa miray hina ny Governemanta eo amin’ny fanatanterahana ny fanamby satria tanjona iray ihany no tadiavina ary fomba fijery iray no entin’ny Mpikambana ao amin’ny Governemanta tsirairay hanatanteraka izay fanamby izay. Fomba fiteny iray no tokony atao amin’ny fanamafisana orina ny firaisankina” hoy hatrany ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Hisy fehin-kevitra lehibe hivoaka amin’ity roa andro ity ka ny zavatra tsy maintsy hapetraka ny asa atao, ny fe-potoana hanatanterahana azy, ny enti-manana hanatontosana azy, ny faritra hanatanterahina ny asa ary ny lafiny serasera amin’ny asa ataon’ny Governemanta.
← Fahatongavan’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier an-tanindrazana